Kurota D9 Max, ongororo yeazvino yepamusoro-inoshanda robhoti vacuum cleaner | Gadget nhau
Robhoti vacuum cleaners yave imwe ye "inofanira" yedzimba yakanyanya kuchinjirwa kune yazvino matekinoroji. Izvi zvakave nekusimukira kwakakosha uye kuvandudzwa mune zvese mashandiro uye mhedzisiro zvakavashandura kuita zvinenge zvakazvimirira zvinhu zvinoita kuti hupenyu hwedu hwezuva nezuva huve nyore.
Panguva ino Ndirove ini haikwanise kupotsa kugadzwa, ichipa huwandu hwakanaka hwemhinduro dzine mutengo wakanaka wemari mumhando iyi yezvigadzirwa zvetekinoroji. Isu tinoongorora iyo itsva Dreame D9 Max, robhoti vacuum yekuchenesa ine kuita kwepamusoro uye mhedzisiro yakanaka, Ziva nesu uye uchakwanisa kuyera kana ichikodzera kutenga kwako, kana kwete.
2 Hukuru hwokugadzira hunhu
3 Autonomy uye kushandisa
4 Tekinoroji dzakashandiswa uye maonero emupepeti
Sezvimwe pane dzimwe nguva uye nezvimwe zvigadzirwa zvayo, Dreame inoratidza shanduko mukugadzira uye kuvaka mhando yezvigadzirwa zvayo maererano nevamwe, kuve nechokwadi chokuti mutengo wayo wakagadziriswa hauoneki maererano nehutano. Isu takatarisana nerobhoti vacuum yekuchenesa neyakajairwa musika zviyero, kubheja pazviyero zve35 × 9,6 zvingangoita 3,8Kg, Kunyangwe chiri chokwadi kuti mazwi ekurema mumidziyo iyi haana kunyanya kukosha, sezvo isu hatisi kuzoatakura. Mutengo wayo unotenderera kutenderedza 299 euros mumapoinzi makuru ekutengesa. Zvakare kana iwe uchida imwe kuderedzwa unogona kushandisa coupon DREAMED9MAX.
Vipimo: 35 × 9,6 masendimita
Mavara aripo: Kupenya kwakasviba uye kupenya kwechena
Vacuuming uye kukwesha zvakabatanidzwa
Iyo ine yakasimbiswa yepakati bhurashi pazasi iyo inosanganisa akasiyana matekinoroji, pamwe chete nedivi bhurasho. Kumusoro tinowana matatu makuru mabhatani ekudzora mabhatani, azvino ekare "hump" yakaiswa nemarobhoti ese ane laser tekinoroji uye kugadzirisa kwetangi remvura. Kune chikamu chayo, tangi yetsvina iri kuseri kwegonhi munzvimbo yepamusoro, iyo inowanzowanikwa mune zvese Roborock uye Dreame zvigadzirwa nguva nenguva. Sezvauri kuona kubva mumifananidzo, isu takaongorora modhi mune nhema.
Hukuru hwokugadzira hunhu
Nezve kurongedza, Dreame anowanzo shanda chikamu ichi nemazvo, kupa panguva ino zvinhu zviri nyore asi zvakakosha: Mudziyo, chigadziko chekuchaja uye magetsi, bhurashi repadivi, tangi remvura rine mop rinosanganisirwa, chishandiso chekuchenesa (mukati merobhoti, pane tangi remarara) uye bhuku rekuraira. Ndapotsa chimwe chinhu chinotsiva senge mamops akawanda, sefa yekutsiva kana bhurasho rekudivi rekutsiva.
Chishandiso chine chinongedzo Wifi, asi sezvinowanzoitika mumidziyo iyi, tinofanira kuyeuka kuti zvichangoenderana chete ine 2,4GHz network. Izvo zvakati, tinowana system ye nLDS 3.0 Laser LiDAR Navigation inoshanda chaizvo, inozoperekedzwa neyako 570ml reservoir yetsvina uye 270ml yemvura kana kuchenesa mvura yatinoda kupa, chero bedzi ichienderana nezvose zviri zviviri mudziyo uye pasi redu iri mubvunzo, chimwe chinhu chatinofanira kubvunza mirairo bhuku kare.
Kana riri simba rekukweva, Dreame inoshuma pane iyi 4000 Pascal pro modhi, simba rakakwirira uye rinoshanda tichitarisa kuenzanisa nezvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro inokosheswa makwikwi. Tichifunga nezve simba rekusveta rakati tichawana ruzha rwakaburitswa pakati pe50db ne65db yakazara, izvo zvakare zvinoita kuti ive yakanyarara marobhoti vacuum cleaner kana tikafunga ichi chakananga chikamu. Ruzha runotsamira pane mana akasiyana mazinga emagetsi atinokwanisa kubata kuburikidza nekushandisa.
Autonomy uye kushandisa
Nezve kuzvitonga, isu tinonakidzwa ne5.000 mAh yakaziviswa nemhando, izvi zvinozotipa kucheneswa kwakatenderedza 150 maminetsi kana kusvika 200 metres, Chokwadi chatisina kukwanisa kuonesa nekuti hatina imba yakakura kudaro (netariro), asi inosvika ne35% pakupera kwekucheneswa. Kucheneswa kwakanyatso kutsanangurwa, pasina kudarika mumapasi uye kunosangana nekuita kunogona kutarisirwa kubva kurudzi urwu rwekuongorora nharaunda nekuda kwe mepu yezvakatipoteredza mu3D (kuburikidza neLiDAR) inoitwa nekukandwa kwema sensors. Mukupfuura kwekutanga, sezvaunonyatsoziva, ichaita zvishoma nezvishoma, nepo kubva zvino zvichienda mberi ichatora mukana wenzvimbo uye nguva nekuda kweruzivo rwakadzidzwa.
Ronga nzira dzakangwara
Gadzira mamepu chaiwo
Chenesa makamuri chaiwo
Nzvimbo dzakachena kune zvaunoda
Inorambidza kupinda kune dzimwe nzvimbo
Isu tine, zvingave sei neimwe nzira, kuwiriranisa ne Amazon Alexa, saka zuva nezuva zvichave nyore kana tikangobvunza mubatsiri wedu ari pabasa. Basa rekubatanidza uye manejimendi echishandiso richaitwa kuburikidza neMi Home application inowanikwa ese ari maviri Android kana iOS. Zvichashanda kunyange tisipo pamba. Kutenda ku yedu smartphone uye yedu pachedu App, tinogona kudzora kucheneswa kwemba kubva chero kupi, kuwana mepu uye kugadzirisa nzvimbo dzekuchenesa.
Tekinoroji dzakashandiswa uye maonero emupepeti
Tinosangana paDreta D9 Max iwo matekinoroji makuru akagadzirwa neDream mumhando idzi dzezvigadzirwa, senge humidity control system kutarisira mvura inoshandiswa mukuchenesa uye kwete kukuvadza parquet, pamwe chete nehungwaru hwekusveta system Carpet Kuwedzera iyo ichasiyanisa makapeti kubva pauriri hwakaoma kugadzirisa kusimba kwevacuum cleaner.
Inosanganisira yakakwirira-inoshanda HEPA sefa.
Chiitiko chedu chave chakanaka kwazvo maererano nekutsvaira, nesimba, pasina ruzha uye nzira dzakanaka dzakagadzirwa kuburikidza neLiDAR scanner, senguva dzose, kukwesha kunowedzera kunyorova mop iyo mune dzimwe nguva inogona kugadzira hunyoro mamaki pasi zvichienderana ne zvinhu zvinoiumba, saka tinokurudzira kubvunza mugadziri. Iwe unogona kuzviwana nemutengo unozobva ku299 euros uine chaiwo zvinopihwa, uchive yakangwara sarudzo maererano nemhando yayo / mutengo reshiyo.
Yakatumirwa pa: December 30 we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: January 4 we2022
Smart mepu uye kugona kwakanyanya
Simba rakanaka rekutsva
Ruzha rwakaderera uye mhedzisiro yakanaka
Kukwesha dzimwe nguva kunosiya mavanga
Zvirikushaikwa kuti dzinosanganisira mamwe maelementi ekutsiva
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Kurota D9 Max, ongororo yeazvino yepamusoro-inoshanda robhoti vacuum cleaner